July 29, 2021 507
काठमाडौँ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको भाग्य उनीहरु जन्मेको समय, ग्रहको स्थिति र नक्षरको हिसाबबाट तोक्न सकिन्छ। हरेक बच्चाको नाम उसको जन्म समय, दशा नक्षत्र, र ग्रहको स्थितिको हिसाबबाट राख्ने गरिन्छ।
Prevयस्ता सपना देख्ने व्यक्ति बन्छन् भविष्यमा धेरै धनी, तपाईले पनि देख्नुभयो की ?
Nextनेपालमै ५० बर्षे पुरुषसँग १५ बर्षिय किशोरीको बिहे, बेहुला देखेपछि बेहुली बेहोस !
कुवेत र दोहाबाट आएको ३ वटा जहाज ल्याण्ड हुन सकेन,काठमाण्डौको आकाशमा फन्को मार्दै